China abicah ukusonga eyo- mveliso kunye nabenzi | SJJ
Ngaba ukhe ube nomfanekiso wokuba nekomityi ecocekileyo nesempilweni yokusela ngokufanelekileyo xa uhamba intaba, inkampu, kuhambo loshishino, uhamba ngaphandle nosapho okanye nabahlobo bakho? Ngoku ukusonga kunye nokuphatha iiNdebe zeSilicone kunye neebhotile kuyenza inyani. Iikomityi abicah kunye neebhotile zenziwe sma ...
Ngaba ukhe ube nomfanekiso wokuba nekomityi ecocekileyo nesempilweni yokusela ngokufanelekileyo xa uhamba intaba, inkampu, kuhambo loshishino, uhamba ngaphandle nosapho okanye nabahlobo bakho? Ngoku ukusonga kunye nokuphatha iiNdebe zeSilicone kunye neebhotile kuyenza inyani. Iikomityi ze-silicone kunye neebhotile zenziwe ngobukhulu obuncinci ngazo zonke iintlobo zokuncamatheliswa ezinje ngemitya, imitya, imisesane yesitshixo, imixokelelwane yamaqhosha, amagwegwe kunye nabanye, kulungele ukubeka ezingxoweni zakho okanye ezipokothweni ngokunjalo. Izinto zokutya ze-silicone zokutya zikhuselekile, iikomityi zesilicone kunye neebhotile ziyagotywa zibekwe ezingxoweni okanye ezipokothweni ukugcina icala elingaphakathi licocekile kwaye lisempilweni. Uyilo lunokuba ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu, iilogo ezahlukeneyo kunye nemibala yenza iikomityi zesilicone kunye neebhotile zithandeke, zithandeke kwaye zinomtsalane. Kulunge kakhulu kwaye kuyamangalisa ukusebenzisa iikomityi zesilicone kunye neebhotile nokuba ungaphandle okanye ngaphakathi. Iindebe ze-silicone kunye neebhotile zizixhobo zobomi bakho bemihla ngemihla kunye nezinto ezintle zonyuselo, ishishini, izipho, izikhumbuzo njalo njalo.
Iimathiriyeli: Ibanga lokutya izinto zeSilicone (i-BRA kunye neFthalate yasimahla)
MOQ: iiPC ezingama-200 okanye zithotyelwe kwisiqhotyoshelweyo
Egqithileyo Abicah imitya
Okulandelayo: Izinto zekhitshi laseSilicone
Imisila yenkomo yebhotile yamanzi
Ibhotile yewayini ebomvu ivula iscorkscrew